Sidee si ay u gudbiyaan Files From Mac in iPad p
> Resource > Mac > Sidee si ay u gudbiyaan Files From Mac in iPad
Waxa ay ahayd bil ah xujo ii on sidee lay socday si ay u gudbiyaan files ka MacBook pro in iPad, waxa kaliya ee aan ku wareejin karaa iPad in aan MacBook laakiin haddii aan gudbin doona ka MacBook iPad waxa aan shaqayn xitaa ma jiidi karaan faylasha, sida codsiyada ama video files.
Jooji iyagoo Halmaansho Xagga. Hadda, waxa ay mar dambe ma adag in ay u guuraan files ka Mac in iPad, inta aad leedahay aalad Mac in iPad kala iibsiga magacaabay Wondershare TunesGo (Mac) . Tani qalab xunna loogu talagalay gelineya inaad si ay u gudbiyaan music, videos iyo sawiro ku saabsan iMac, MacBook, MacBook Pro in iPad oo aan ka kaaftoomi kasta. Waxa aad u yaab waa in software taasi marnaba ka saari doonaan wax files on your iPad marka loo dhoofiyo files u galay.
Download qalab si la isugu dayo files ka Mac gudbaayo iPad.
Fiiro gaar ah: Sida dadka isticmaala Windows, waxaad caawimaad ka codsan kartaa Wondershare TunesGo (Windows). Waxa ay ku siinaysaa fursad ay ku wareejiso music, videos, sawiro iyo xiriirada ka Mac in iPad si fudud aad.
Tallaabooyinka fudud si ay u gudbiyaan files ka Mac in iPad
Hadda, rakibi iyo ordi kala iibsiga qalabka Mac in iPad aad Mac. Markaas, raac tallaabooyinka fudud oo si sahlan hoos ku qoran.
Step1. Connect aad iPad si Mac
Isticmaal cable USB ah si aad u hesho iPad ku xiran Mac. Ka dib markii ay ku xiran, aad iPad lagu baari doono TunesGo (Mac) isla markiiba. Markaas, aad iPad muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa hoose ee shaashadda Mac.
Fiiro Gaar ah: Tani qalab Mac in iPad kala iibsiga si fiican u shaqeeyaa in u dhaqaaqo files ka Mac in iPad Air, iPad mini, iPad Cusub, iPad bandhigay isha, iPad 2 iyo iPad marka ay kaliya socda macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 ama macruufka 5.
Step2. Copy files ka Mac in iPad
Copy music ka Mac in iPad.
Tiirka bidix, u tag "Music". Furmo suuqa music ayaa u muuqda mid ku Murayaad saxda ah, on line ugu sareeya, guji "Add". In file suuqa kala pop-up browser, falgali in folder aad Mac halkaas oo uu idiin badbaadiyo heeso. Markaas, guji "Open" in aad nuqulka music aad iPad.
Bedelka photos on Mac in iPad.
Guji "Sawirro" khaanadda tagay. On khaanadda saxda ah ee suuqa kala sawirka, dooran album hoos Photo Library si loo badbaadiyo sawirrada. Ama waxaad riixi kartaa "Abuur Album" si uu uga mid cusub.
Markaas, furo album ah. On line ugu sareeya, guji "Add". Browser aad Mac si aad u hesho folder sawir aad Mac ah. Markaas, aad dooran photos doonayay oo iyaga soo dhoofsadaan. Ama, waxaad uun jiidi karaan iyo hoos u sawiro ka Mac si aad iPad.
Videos ka dhaqaaq Mac in iPad.
Kaalay column ka tegey oo guji "Movies" ama "Show TV". Markaas, adigoo gujinaya "Add", waxaad ka heli suuqa kala file browser. Dul caga meesha videos waxaa lagu badbaadiyey. Markaas, dooro videos aad la jecelyahay iyo mid ku dhaqaajiyaan si aad iPad.
Isku day TunesGo si ay u gudbiyaan files ka Mac in iPad.